ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - ယူကေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို အနိုင်ရမှာပါလို့ ဘုရင်မကြီးပြော
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - ယူကေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို အနိုင...
6 เม.ย. 2563 - 03:15 น.
နိုင်ငံသားတွေကို စုစည်းမိအောင် အားပေးတဲ့ အနေနဲ့ ပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ ဘုရင်မကြီးက ယူကေဟာ အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကို "အနိုင်တိုက်နိုင်မှာပါ" လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဘုရင်မကြီးအနေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို အခုလို တိုက်ရိုက်ပြောဆိုတာမျိုး ရှားပါးပါတယ်။ အခု မိန့်ခွန်းမှာတော့ သူက အစိုးရက ထုတ်ပြန်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာပြီး အိမ်မှာနေကြတဲ့ လူတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီး လိုအပ်ချိန်မှာ "တခြားလူတွေကို ကူညီဖို့ စုစည်းညီညွတ်ခဲ့ကြသူတွေ" ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဓိက လုပ်ငန်းတွေမှာ ဆက်ပြီး တာဝန်ထမ်းပေးနေကြတဲ့ လုပ်သားတွေကိုလည်း ဘုရင်မကြီးက ကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ တာဝန်ထမ်းပေးတဲ့ "နာရီတိုင်းဟာ ပြည်သူတွေ ပုံမှန်ဘဝပြန်ရဖို့ ပိုပြီးနီးစပ်လာစေတယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။
ယူကေမှာ ဒီကနေ့ နောက်ဆုံးစာရင်းအရ သေဆုံးသူ ၄၉၃၄ ယောက်ရှိလာပါပြီ။
"အရင်ကလည်း အခုလို အခက်အခဲတွေ၊ ဘေးဆိုးကြီးတွေ ကြုံခဲ့ဖူးကြပေမယ့် ဒီတစ်ကြိမ်ကတော့ အရင်အခေါက်တွေနဲ့ ကွာခြားပါတယ်"လို့ ဘုရင်မကြီးက ပြောပါတယ်။
"ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ကမ္ဘာတလွှားက နိုင်ငံအားလုံးနဲ့အတူ ဝိုင်းပြီး ကြိုးစားတွန်းလှန်ကြရတယ်။ နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေကို သုံးပြီး လူရဲ့ ပင်ကိုယ်အားလုံးကို အေးငြိမ်းသက်သာစေလိုစိတ်တွေကို သုံးကြတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာလည်း အောင်မြင်မှာပါ။ အဲဒီအောင်မြင်မှုဟာ လူတိုင်းနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်" လို့ ဘုရင်မကြီးက ပြောပါတယ်။
"နောက်ထပ် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမှာတွေ၊ ခံစားရမှာတွေ ရှိနေနိုင်သေးပေမယ့် နေ့ကောင်းတွေ ပြန်ရောက်လာမှာပါ၊ ဒီအချက်ကို ကြည့်ပြီး နှစ်သိမ့်နိုင်ကြပါတယ်။ မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ ပြန်ဆုံကြဦးမယ်။ မိသားစုတွေနဲ့ အတူရှိနေကြဦးမယ်။ ပြန်ဆုံကြဦးမှာပါ။"
အသက် ၉၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဘုရင်မကြီးက အခု ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လိုအပ်ချက်အရ မိသားစုတွေ တစ်စုတည်းမနေရဘဲ ခွဲနေရတဲ့ နာကျင်ခံစားရမှုတွေက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေ မိဘတွေနဲ့ ခွဲနေခဲ့ရတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ပြန် အမှတ်ရစေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒီတုန်းကလိုပဲ အခုလည်း ဒီလိုလုပ်ရတာဟာ မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ သူသိပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အစိုးရရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အိမ်မှာပဲနေသူ တစ်ဦးချင်းတိုင်းဟာ တခြားလူတွေ ရောဂါပိုးမကူးစက်ခံရနိုင်အောင် ကူညီပေးနေသူတွေ ဖြစ်ကြပြီး ချစ်ခင်ရသူတွေ ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ မိသားစုတွေ ခံစားရတဲ့ နာကျင်သောကမျိုး တခြားမိသားစုတွေ မခံရအောင် ကူညီလုပ်ပေးနေသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်လို့ ဘုရင်မကြီးကပြောပါတယ်။
ဒီ ရောဂါဆိုးကြီးကို အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်နေကြတယ်။ အားလုံး ညီညွတ်ပြီး စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာကြမယ်ဆိုရင် ဒီဘေးကို ကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတာကို သူအခိုင်အမာပြောချင်ပါတယ်လို့လည်း ဘုရင်မကြီးက သူ့မိန့်ခွန်းမှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။
ဘုရင်မကြီးရဲ့ မိန့်ခွန်းကို ရုပ်သံ၊ ရေဒီယိုနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေက ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီမိန့်ခွန်းအတွက် ကင်မရာမင်းတစ်ဦးတည်းက ရိုက်ကူးယူခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း အကာအကွယ်တွေ ဝတ်ဆင်ထားတယ်၊ တခြား နည်းပညာအရ အကူအညီပေးရမယ့်သူတွေက နောက်အခန်းတစ်ခုထဲကနေ ပါဝင်ကူညီပေးခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
တိုင်းပြည်အရေးပေါ် အခြေအနေကြုံနေရချိန် ဒီလိုမိန့်ခွန်းပြောဖို့ ဘုရင်မကြီးနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ရုံးတို့ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
၁၉၄၀ ခုနှစ်က စစ်အတွင်း မိဘတွေနဲ့ ခွဲခဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေကို တိုက်ရိုက်စကားပြောနေတဲ့ အဲလိဇဘက်နဲ့ မာဂရက် မင်းသမီး ညီအစ်မ
အရင်က ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေ
ဘုရင်မကြီးဟာ သူ့ရဲ့ နန်းစံသက် ၆၈ နှစ်မှာ အရင်က လေးကြိမ်ပဲ အခုလို ပြည်သူတွေကို တိုက်ရိုက်စကားပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒါတွေက
၂၀၁၂ ဇွန်လမှာ သူ့ရဲ့နန်းသက် နှစ် ၆၀ ပြည့်ချိန်က လူထုကို ရုပ်သံကနေ မိန့်ခွန်းပြောခဲ့တာ
၂၀၀၂ ခုနှစ် ဧပြီလက မယ်တော်မိဘုရားကြီးရဲ့ စျာပနမတိုင်ခင် တစ်ရက်မှာ လူထုကို စကားပြောတာ
၁၉၉၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက ချွေးမတော် ဒိုင်ယာနာမင်းသမီးရဲ့ စျာပနမတိုင်ခင်တစ်ရက်မှာ လူထုကို တိုက်ရိုက်စကားပြောတာ နဲ့
၁၉၉၁ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့က အီရတ်နဲ့ မြေပြင်စစ်စဖြစ်ချိန်မှာ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခု ဖတ်ကြားတာတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - ယူကေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို အနိုင်ရမှာပါလို့ ဘုရင်မကြီးပြော